Dhinda Regedzo Na FEELM Admin 20-11-19 Siya mhinduro
Maitiro epamutemo nezvekupisa uye nicotine kushandiswa zvakawandisa zvinosiyana. MuUnited Kingdom, kuputika kunonyanya kukurudzirwa nemasangano ehurumende ehutano. Nekuti kusvuta kunounza mutoro unodhura kuUK's National Health Service, nyika inomira kuchengetedza mari kana vanosvuta vakachinjisa e-midzanga panzvimbo. Dzimwe nyika zhinji zvakare ...
Vaping Mitero muUnited States uye Kutenderera Nyika
Dhinda Regedzo Na FEELM Admin 20-10-15 Siya mhinduro
Sezvo vaping ichikura mukuzivikanwa, inova tarisiro yechisikigo kune hurumende dzinoda mutero wemari. Nekuti zvigadzirwa zvemhepo zvinowanzo tengwa nevaputi uye vaimbo puta, vakuru vemitero vanofungidzira nenzira kwayo kuti mari inoshandiswa pa e-midzanga imari isiri kushandiswa pazvigadzirwa zve fodya zvechivanhu. Hurumende dzakatsamira pamidzanga uye zvimwe ku ...
India: Vapers Vacharatidzira Kurambidza paGunyana 18th Anniversary
Dhinda Regedzo Na FEELM Admin 20-09-10 Siya mhinduro
Vamiriri veIndia vaping vachabata kuratidzira panguva imwe chete kutenderera nyika neChishanu, Gunyana 18, kucherechedza gore rimwe kubva hurumende yeIndia yakarambidza kutengeswa kwezvinhu zvinoputika. Chiitiko ichi chiri kurongwa neAssociation of Vapers India (AVI). "Tiri kuunza mhepo pamwe chete kuti tisimudzire kuramba kwedu kurambidzwa kwenyuchi negove ...
Dhinda Regedzo Na FEELM Admin 20-08-23 Siya mhinduro
Mitsva mitsva yekuongorora yakaburitswa neCDC inoratidza kudonha kwepfumbamwe kubva muzana mukuyaruka kubva ku2019 kusvika 2020, kuchiunza kumatanho ekupedzisira akaonekwa pamberi pa2018.Zvechokwadi, CDC neDFA vakasarudza imwe nzira yekuburitsa mhedzisiro. Mhedzisiro yakasarudzwa (asi kwete iyo data yavakabva) yaive chikamu chemushumo weCDC wakaburitswa Nyamavhuvhu 9 - zuva rimwe chetero raive ...
Kusvuta Imwe nzira, Midzanga Yekupisa, Epen, E Midzanga Blister Pack, E Liquid Vapor Midzanga, Newport E Midzanga,